बेश्यालय, नेपाली फोहोरी राजनीति र ओली प्रचण्ड एकता | himalayakhabar.com
22nd May 2018, Tuesday | २०७५ जेष्ठ ८, मंगलवार ०७:१५
जनताले सधैं साँचो बोल्नुपर्ने, तर नेताहरुले जे बोले पनि हुने ? जसो गरे पनि हुने ? बिहान एउटा साँझ अर्कै कुरा फेरे पनि हुने ? के राजनीतिमा जे पनि हुन्छ ? जे पनि गर्न पाईन्छ ? नेताहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन ? जिम्मेवारी छैन ? के जनता भनेको तिम्रा शक्तिखोरका भ्रमहरु सुन्दै ताली मार्नका लागि मात्र हुन ? के जनता तिम्रा उखान, टुक्का, बकबास सुन्दै हाँस्न र ताली मार्नका लागि मात्रै हुन ? के नेपाली जनता अनपढ देखी अपराधी सम्म, पढेका भनिने तर न बोल्ने ढंग, न चल्ने ढंग भएका, अपराधीलाई पालैपालो बोक्न मात्र जानेका नालायकहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै चाहिने हुन ? राजनीतिमा बिचार, सिध्दान्त हुन्छ कि हुँदैन ? तपाईंहरु छातीमा हात राखेर भन्नुस त के यस्तै हुन्छ राजनीति ?? राजनीतिका नाममा यो चारित्रिक, नैतिक बेश्याब्रित्ती होइन र ?
( प्रधान सम्पादक - नेपालमदर डटकम, वाशिङ्टन डिसी, अमेरिका, मे २१, २०१८ )
सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी गोरे पक्राउ, ठूला माछाको पर्दाफास हुने
२०७५ जेष्ठ ८, मंगलवार ००:४३
काठमाडौँ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी एवम् सनम शाक्यको हत्याका मुख्य योजनाकार चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पक्राउ परेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा ...
आईपीएलमा उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि सन्दीपको चर्चा चुलियो
२०७५ जेष्ठ ८, मंगलवार १८:४०